Snapdragon 730 ပါသည့် Xiaomi ကို၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး ကကြေငြာခဲ့သည် Androidsis ပါ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Redmi India သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်နှစ်လုံးကိုကြေငြာခဲ့သည် Redmi Y3 နှင့် Redmi 7မရ။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ Xiaomi India ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပိုမိုအစွမ်းထက်သောဖုန်းသည်မကြာမီဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ပြီးတော့သူကလွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကလုပ်ခဲ့တယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာကဒီဖုန်းကို Qualcomm ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Snapdragon စီးရီးကိုသုံးလိမ့်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်။ Snapdragon 730 (သို့) Snapdragon 730G.
မကြာသေးမီကတင်ခဲ့သောတွစ်တာ၌ Xiaomi India ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Manu Kumar Jain သည် Qualcomm India အမှုဆောင်နှစ် ဦး နှင့်အတူရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံကိုမျှဝေခဲ့သည်။ သူအကြောင်းပြောခဲ့တယ် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားပူးပေါင်းမှုနှင့် Xiaomi ဖုန်းရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်.
Rajen အစည်းအဝေးကြီး @rajen_vagadia & Kedar မှ #Qualcomm.@Xiaomi & @qualcomm နောက်ဆုံးပေါ်နဲ့အကောင်းဆုံးတွေယူဆောင်လာဖို့အမြဲအတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
အထူးသတင်း - အသစ်တစ်ခု #Xiaomi နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်း #Snapdragon 7_ _ (လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကြေငြာသည်) မကြာမီအိန္ဒိယသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ခန့်မှန်းချက်များရှိပါသလား။ ? pic.twitter.com/TnrnTOR4PI
- Manu Kumar Jain (@manukumarjain) ဧပြီလ 26, 2019
သူထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောသတင်းကဒီနောက်ဆုံးပေါ် "Snapdragon 7_ _ (လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကြေငြာသည်)" ပါလိမ့်မယ်။ Snapdragon2နှင့် Snapdragon 730G တို့သည်ယခုလတွင် Qualcomm မှထုတ်လုပ်ခဲ့သော Snapdragon 730 chipset နှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Snapdragon 730 သည်ကုမ္ပဏီမှရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်.
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကျော်က Redmi ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အဓိက Specs များပေါက်ကြားလာပါတယ်မရ။ ပေါက်ကြားချက်အရဒီဖုန်းကို Snapdragon 730 ပရိုဆက်ဆာ၊ ဘက်ထရီ 4,000 mAh နှင့်ကင်မရာသုံးလုံးတပ်ဆင်ထားသည် (48 MP + 8 MP + 13 MP) တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အိန္ဒိယသို့ ဦး တည်သောတူညီသောကိရိယာဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးဖြစ်သည် တရုတ်မှာပထမဆုံးဖြန့်ချိနိုင်ပါတယ်.
ပေါက်ကြားမှုများရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းအမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များမရရှိသေးပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အခိုင်အမာယုံကြည်ပါသည် အိန္ဒိယမှာ Mi ဖုန်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ Redmi ဖုန်းအဖြစ်အိန္ဒိယမှာစတင်ဖြန့်ချီမှာပါ။ ဤသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤမူပိုင်ခွင့်သည် Xiaomi Mi MIX4၏ဒီဇိုင်းကိုကင်မရာ၌အံ့အားသင့်စေပြီးပြသသည်
ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်၊ ၎င်းသည် Mi A3 ဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်Android One အဖြစ်ရောက်လာလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအရာအားလုံးထက်ထင်ကြေးပိုများတယ်။ တိကျတဲ့ဖြန့်ချိမယ့်ရက်မရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအရမ်းမြန်လာလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Snapdragon 730 ပါသည့် Xiaomi ကို၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး ကကြေငြာခဲ့သည်
LCD panel များအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး screen in fingerprint scanner ကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့သည်